Ninka dunida ugu gaaban oo noqday 72 jir u dhashay dalka nepal | Starfm.co.ke	Saturday, May 18th, 2013	Home
Ninka dunida ugu gaaban oo noqday 72 jir u dhashay dalka nepal
Published on March 11, 2012 by Waxaa Qoray Abdullahi Ahmed · No Comments
Share11.3.2012 Nin beeralay ah oo ka soo jeeda dalka Nepal ahna 72-jir ayaa si rasmi ah loogu aqoonsaday inuu yahay ninka dunida ugu gaaban.
Dhaqtar iyo sarkaal ka socday ururka la yiraahdo Guinness World Records oo gaaray dalka Nepal si ay u soo cabiraan Chandra Bahadur Dangi ayaa xaqiijiyey in uu dhererkiisu yahay 21.5 inches (54.6 centimeters), waxayna ku dhowaaqeen in ninkan la yaabka leh uu noqday qofka dunida ugu gaaban.
Guiness ayaa waxa ay guddoonsiiyeen odayga labo shahaado oo cadeyneysa in uu yahay ninka ugu gaaban dunida ee la diiwaangeliyey muddo 57sano ah.
Dangi ayaa ku nool tuulo fog oo ku taal meel buuraley ah oo ka mid dalka Nepal waxana uu sheegay inuu doonayo indunida uu soo maro kuna safro wadamo badan oo caalamka ah.
Dangi ayaa ka gaabtay ninkii hore u haystay rikoorkan oo ahaa Junrey Balawing oo u dhashay dalka Philippines, kaasoo dhererkiisu yahay 23.5 inches (60 centimeters).
Waxana uu ninkan ka qaaday sanadkii hore gaabnida dunida Khagendra Thapa Magar oo 18 jir ah kaasoo dhererkiisu noqday 26 inches.
Nepal’s Chandra Bahadur Dangi, ayaa aqriyey buuga lagu qoro taariiqaha ee Guinness World Records 2012 kadib markii si rasmi ah loo shaaciyey inuu yahay ninka ugu gaaban dunida.
Waxana uu Chandra isagoo kaftamaya yiri Buugga ayaaba iga weyn aniga!!.
Dangi ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in u unoqday ninka dunida ugu gaaban, Waxana uu sheegay inuusan weligii daawo isticmaalin amaba xitaa taqtar baaritaan ku sameeyey.
Balse waxa uu qirtey in hargab uu ku dhacay dhowr mar balse uu isticmaalay biyo kulul iyo cunto ka mid ah kuwa laga isticmaalo dalkiisa kadibna uu ku bogsaday.
‘Aniga ma jiran waayo jirkeyga ayaa wanaagsan.’ayuu yiri Chandra
Chandra ayaa marka uu cuntada cunayo waxa uu isaga fariistaa miiska dushiisa oo aan wax dhib ah uusan u arkin.
Dangi ayaa ah ilmaha toddobaad qoys ka kooban lix wiil iyo labo gabdhood, mana xusuusto aabihii iyo hooyadii oo dhintay markii uu 16sano jir ahaa. Hase yeeshee waxaa soo barbaariyey walaalkii ka weyn.
Dangi oo la weydiiyey sababta uusan hore u soo dalban in la cabiro ayuu sheegay in ay yihiin qoyskiisu kuwo jaahiliin ah oo aanba horeba uga warqabin in uu jiro rikoor dunida ay ku tartanto.